Noho ny fanohanan'ny orinasa miaraka amin'ny tranokala famokarana maherin'ny 64000 metatra toradroa sy mpiasa maherin'ny 2500 miampy ny zavamaniry elektrôlika mandeha ho azy farany sy ny milina fandefasana loko miloko malefaka, dia mihoatra ny mpifaninana aminay ny kalitaon'ny avo indrindra, ny manam-pahaizana manokana, ny fahatsorana ary ny kalitaon'ny vokatra tsara indrindra izahay, indrindra ho an'ny be dia be takiana fotoana fohy na sarotra drafitra mila mpiasa za-draharaha. Natokana ho an'ny fifehezana kalitao henjana sy serivisy ho an'ny mpanjifa misaina, ny mpikambanay efa za-draharaha dia misy foana hiresaka momba ny zavatra takinao sy hiantohana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Fitaratra ho an'ny paosy vita amin'ny paosy
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-09-15
Ianao ve mitady zavatra hampiroborobo sa fanomezana tsara tarehy ho an'ny zazavavy na vehivavy? Iray amin'ireo fanomezam-pahasoavana tsara indrindra - fitaratra fanaovana akrilika sy metaly lamaody dia safidy mety ho anao. Ny fitaratra paosy mahafinaritra sy marevaka dia azo atao amin'ny fitaovana samihafa ao anatin'izany ny vy, ny zinc al ...
Tianao ny fanatanjahan-tena any ivelany? Manahy ve ianao ny amin'ny tsy fanananao toerana itehirizana ny findainao na ny zava-tsarobidy mandritra ny fanatanjahan-tena? Ny lamaody fanatanjahan-tena lamaody sy kitapo andilana dia hamaha ny ankamantatra, ary tsy hanana traikefa tsy mahalala hoe aiza no hametrahana ny findainao na ny anao manokana ...
Ianao ve mitady fomba ara-tontolo iainana hanatsarana ny fampiroboroboana anao? Ianao ve mila vokatra fampiroboroboana vita amin'ny akora natoraly hampiasaina ho fanomezana na manandratra ny marikao? Ary raha manana ahiahy amin'ny fanafoanana ny fako plastika amin'ny tontolon'izao tontolo izao ianao, zavatra fampiroboroboana hazo ...